बेहालै भएछ नि! अनलाइन कक्षा सकेर क्यामेरा अफ नगरि श्रीमतिसँग गरेको भिडियो बाहिरिएपछि (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > बेहालै भएछ नि! अनलाइन कक्षा सकेर क्यामेरा अफ नगरि श्रीमतिसँग गरेको भिडियो बाहिरिएपछि (भिडियो सहित)
admin May 4, 2021 अन्तराष्ट्रिय, रोचक	0
डेलीमेल एजेन्सी । अनलाइन पठनपाठनको समयमा श्रीमतीसँग हेर्न नसक्ने अवस्थामा फेला परेका शिक्षकले माफी मागेका छन् । कोलम्बियाका एक क्याथोलिक स्कूलका शिक्षकले उनको श्रीमतीको हेर्न नसक्ने भागहरु सुम्सुम्याइरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो । विद्यार्थीहरूको कक्षाको बेला जूम कल बन्द गर्न बिर्सिएपछि उनको सबै हर्कत रेकर्ड भएको छ । रुबेन डारियो पारस नामका शिक्षकले महसुस गरेनन् कि उनको भिडियो लाइभ गइरहेको छ ।
**यो समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्**